Resaky ny mpitsimpona akotry : tànana efa zatra nitsotra, Sady hany sisa fivelomana ny varotra amoron-dàlana (NewsMada) | AEMW
Resaky ny mpitsimpona akotry : tànana efa zatra nitsotra, Sady hany sisa fivelomana ny varotra amoron-dàlana (NewsMada)
Tany am-piandohana samy niseho be fandeferana avokoa ny tompon’adidy nifandimby toerana na ireo tany amin’ny fitondrana foibe na ny tompon’andraikitra eo amin’ny fitantanana ny tanàna. Tamin’izany dia efa samy nanao fahadisona izy ireo, tsy nijery lavitra. Efa manararaotra ity ny fery vao taitra ka tsy maintsy mandray fepetra enjana dia enjana izay mangirifiry sahazan’ny fiitatry ny vay. Ramatoa Ben’ny Tànana moa no lohalaharana toy ny sorona mitaty ny fifoteran’ny rihatra. Fantatra nefa fa ny maha maha hamehana ny fitondrana dia ny fanomezana ny tanàna endrika sarisarina tanàna manara-penitra, vonjy maika io nohon’ny fanomanana ny fampiantranona an’ ilay Fivoriana Tampon’ny Fikambanamben’ny Firenena mampiasa teny frantsay, O.I.F.
Eo angamba ny vatokely tsy nampoiziny mety anafitohina an’andriamatoa Marc Ravalomanana eo amin’ny làlana diavina araky ny tetika noheverina hiverenana any amin’ny fitondrana tampony. Efa ela (volana Jolay 2009) dia efa taratra ary vaosoratra fa Ramatoa vadiny no tsy maintsy misava làlana raha misy izany faniriny hiverina eo amin’ny fitondrana izany. Io nefa misy sampona kely.
Iny moa dia raharahany samy irery miaraka amin’ireo mpiray dia aminy.
Ny fahasahiranana mameno ny arabe izao dia ny fifanenjanana miseho amin’ny fifandonan’ny hery roa tonta, anilany ny mpitandro filaminana izay manatanteraka ny baiko, andaniny ny vondron’ny mpivarotra izay manohitra ny hery amina tetika fampisehona fibodona toerana.
Mahagaga ny didohan’ny mpitondra eo amin’ny fanafoanana ny fivarotana amoron-dàlana. Moa ve misy fifamatorana mangina nifanaovan’ny sasantsasany ao amin’ny fitondrana miaraka amin’ireo mpivarotra ambongadiny izay mamatsy entana an’ireo mpivarotra amoron-dàlana ? Raha toa ka tsy misy ny fitsikombakombana toy izany, inona no manakana ny fandrarana an’ireo tompon’entana ireo ny famatsina entana amina mpivarotra tsy manana alalàna fanaovam-barotra ? Rava ho azy ny fivarotana an-tsisin-dàlana raha jifa ny famatsiana. Maizimaizina ny momban’izay. Fifanarahana miafina tsy ilaozan’izay iteraka fahamaizinana izay.
← Semi-marathon – Zone Australe : les équipes malgaches constituées (NewsMada)
Masters de pétanque : les Malgaches out (NewsMada) →